Aqalka sare ee baarlamaanka Maraykanka oo diiday xoojinta xakamaynta hubka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldAqalka sare ee baarlamaanka Maraykanka oo diiday xoojinta xakamaynta hubka
June 21, 2016 Puntland Mirror World 0
Aqalka sare ee baarlamaanka dalka Maraykanka ayaa diiday qorsheyaal lagu sii xoojin lahaa xakamaynta hubka.
Qorshayaashaas waxaa kamid in la hor istaago in hub laga iibiyo dadka kujira liiska qolyaha argagixisada looga shakisan yahay.
Afar qorshe ayaa la hor keenay aqalka Senate-ka kaddib markii 49 ruux lagu dilay weerar ka dhacay baar ku yaala magaalada Orland ee gobolkaFlorida. Laakiin xubnaha aqalka ayaa u kala codeeyay sidii ay qorsheyaashaas u kala wateen xisbiyada ay ka kala tirsanyihiin ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga.
Xildhibaanada ayaana qolo kasta ka soo horjeedsadeen qorshihii uu watay xisbiga kale.
Xubnuhu waxay aad isugu khilaafeen sidii looga hor tagi lahaa in weeraro kale ay dhacaan mustaqbalka.
Iibsashada hubka fudud ayaa sharci ka ah dalka Maraykanka, Madaxweyne Obama oo katirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa marar badan damcay in Maraykanka laga joojiyo iibka hubka, balse waxaa diidmo qayaxan kala horyimid xisbiga uu tartanka kala dhaxeeyo ee Jamhuuriga oo gabi ahaanba kasoo horjeestay qorshaha Barrack Obama iyo xisbigiisa.
October 5, 2016 Madaxweynaha dalka Filibiin Rodrigo Duterte oo u sheegay Obama ‘in uu naarta galo’
September 30, 2018 Wasiirka Arrimaha Dibada Soomaaliya oo Qaramada Midoobay ka dalbaday in cunoqabateynta hubka laga qaado
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa gobolka Bakool ka afduubatay caruur ka badan 100 oo kunoolaa halkaas. Guddoomiye ku xigeenka maamulka degmada Tiyeeglow ee gobolka Bakool Cali Cabdinuur Iimaan ayaa warbaahinta u sheegay in Al-Shabaab ay [...]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Maxkamada ciidamada Puntland ayaa maanta oo Isniin ah xukun dil ah ku riday todobo xubnood oo katirsan ururka Al-Shabaab. Isaga oo saxaafada kula hadlayay magaalo xeebeedka Boosaaso, taliyaha maxkamada ciidamada qalabka sida ee [...]